अटो बजार – ताजा समाचार
एजेन्सी । कोरोना भाइरस महामारी पछि चीनले पशु अधिकारको पक्षमा उचित निर्णयहरु लिँदै गएको छ। वुहान तथा हुबेई क्षेत्रमा जंगली वन्यजन्तुको बिक्रि वितरणमा रोक लगाएको चिनले शेनझेन शहरमा ‘ऐतिहासिक’ रुपमा नयाँ कानून पारित गर्दै कुकुर र बिरालोहरु खान प्रतिबन्ध लगाएको छ। दक्षिणी चिनियाँ शहर शेनझेनका सांसदहरुले पाल्तु जनावरको मासु प्रतिबन्धको लागि देशमै पहिलो कानून पारित […]
काठमाडाैं, चैत ४ : रक्त समूह ए का मानिस कोरानाको संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। चीनका चिकित्सा अनुसन्धाकर्ताहरुले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले रक्त समूह ए का मानिस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको हो। दुई हजार जना कोभिड- १९ संक्रमितहरुमा अनुसन्धान गर्दा अधिकांश व्यक्तिहरु रक्त समूह ए को रहेको देखिएको हो। चिकित्सा अनुसन्धानकर्ता वाङ […]
काठमाडौं । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आफ्नो सेवालाई थप सहज बनाउन उपत्यकाको थप ३ ठाउँका कार्यालयमा सेवा विस्तार गरेको छ । महाशाखाले ट्राफिक नियम उलंघन गरी कारबाहीमा पर्ने सवारी चालकको कागजपत्र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी परिसर भक्तपुर, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी वृत्त, नयाँ बसपार्क र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, गौशालाबाट पनि फिर्तादिने गरी सेवा विस्तार गरेको हो […]
सिताराम हाछेथु : सजिलो, सस्तो र छिटो हुने भएकाले मोटरसाइकल लोकप्रिय यातायातको साधनमा पर्छ । ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको आँकडा अनुसार काठमाण्डौमा मात्रै १० लाख भन्दा बढी मोटरसाइकल गुड्छन् । यात्रा गर्न सहज भए पनि मोटरसाइकल निकै जोखिमपूर्ण यातायातको साधन हो । लड्दा होस् या कतै ठोक्किँदा, सबैभन्दा बढी असर मोटर साइकल र चालकलाई पर्ने गर्छ […]
काठमाडौं । सवारी साधनमा प्रयोग हुने क्लच निकै महंगो मध्यको एक पाट्स हो । क्लच प्लेटको मूख्य काम इन्जिन र पाड्ग्राबीचको सम्बन्ध जोड्ने तथा फुकाउने हो । सामान्यतया मोटरसाइकलमा क्लच प्लेटको धेरै समस्या आइरहेको हुने गर्छ । हेवी ट्राफिकमा धेरै चलउनु पर्दा क्लज प्लेट धेरै बिग्रने गर्छ । जति धेरै क्लचको प्रयोग गर्यो त्यतिनै क्लचमा […]
नेपालमै बनेको बजाज डोमिनार ४०० को बिक्री सुरु, भारतबाट आयात हुँदा भन्दा सस्तो !
काठमाडौं । नेपालमा नै एसेम्वल भएको बजाज डोमिनार ४००को बिक्री सुरु भएको छ । बजाज मोटरसाइकलको नेपालको लागि आधिकारीक वितरण एचएच बजाजले डोमिनार ४०० को बिक्री सुरु गरेको हो । कम्पनीले गत बर्षदेखि नेपाल मा मोटरसाइकल एसेम्वल गर्दै आएको छ ।नवलपरासीमा रहेको कम्पनीको प्लान्टमा निर्माण भएको बजाज डोमिनार भारतबाट आयात हुँदाभन्दा सस्तो मूल्यमा कम्पनीले बिक्री […]
यी ७ कुरा बुझेर मात्रै किन्नुहोस् एडभेन्चर बाइक
काठमाडौं । पछिल्लो समय एडभेन्चर बाइकको बजार विस्तार हुँदै गएको छ । अफरोड भर्सनमा निर्माण हुने एडभेन्चर बाइक युवापुस्ताको विशेष रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । एडभेन्चर बाइक उच्च पर्फमेन्स, पावरफुल इन्जिन, आकर्षक लुक्स तथा बडी डिजाइनका कारण चर्चामा आउने गर्छन् । जस्तोसुकै सडकमा सहजै गुड्ने भएकाले पनि टाढा र अप्ठ्यारो सडकको यात्राको लागि यही बाइकको […]
जनवरीदेखि गाडीको मूल्य बढाउने कम्पनीहरुको तयारी, कति बढ्दैछ मूल्य ?
काठमाडौं । अधिकांश गाडी निर्माता कम्पनीहरुले सन् २०२० को जनवरीदेखि नै गाडीको मूल्य बढाउने भएका छन् । आगामी अप्रिलदेखि विएस–६ मापदण्ड अनुसार मात्र गाडी निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल अन्य मापदण्डका गाडीको मूल्य नबढ्ने आँकलन गरिएको थियो । तर अधिकांश कम्पनीहरुले जनवरीदेखि नै मूल्यबृद्धि हुने जानकारी दिएका छन् । गाडी निर्माणमा लाग्ने सामग्रीहरु महंगो भएका कारण […]
काठमाडौं रातोपुलस्थित आशिष मोटर साइकल वर्कशपमा काम गर्छिन् सरस्वती सुवाल। ग्राहकहरू माझ सरू भनेर चिनिने सरस्वती ४३ वर्षकी भइन्। उनी मोटरसाइकल मर्मत-सम्भार गर्छिन्। उनले पूर्ण रूपमा काम थालेको करिब १५ वर्ष भयो। ३३ सालमा चितवनको नारायणघाटमा जन्मेकी सरस्वती परिवारकी जेठो सन्तान हुन्। उनका दुई बहिनी र एक भाइ छन्। उनले गाउँनजिकैको स्कुलमा ६ कक्षासम्म पढिन्। […]
काठमाडौं । रोयल इनफिल्डको नेपालका लागि आधिकारीक बिक्रेता एभ.भी.दुगड ग्रुपको विवेक अटोमोबाइल्सले रोयल इनफिल्डको अत्याधिक लोकप्रिय मोडल क्लासीक ३५० सी.सी. डुअल च्यानल एविएस सहितको बिएस आइभि नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । Royal Enfield Classic 350 Key Specifications Engine Displacement: 346 cc Mileage (city): 37 kmpl Max Power: 19.8 BHP @ 5250 RPM Max Torque: […]
काठमाडौँ । नेपालमा अहिले कार आम मानिसहरुको लागि आवश्यकताको सामान भैसकेको छ तर सरकारले गाडीलाई विलासिताको सामानको दर्जामा राखेको कारणले गर्दा मध्यमवर्गिय आयश्रोत भएका धेरै नेपालीहरुले कार चढ्ने सपनालाई साकार पार्न सकेका छैनन् । नेपालीहरुले कार चढ्नको लागि नै मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ जो आम नेपालीहरुको क्रयशक्तिले सम्भव छैन । बजारमा २० लाख […]
काठमाडौं । हुलास मोटर्सले नेपालमै उत्पादन गरिरहेको कार परिक्षण सुरु भएको छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार अहिले विराटनगर वरपर परिक्षण भइरहेको यो कार त्यहाँको परिक्षण पुरागरि काठमाडौंसम्म ल्याउने तयारी भइरहेको छ । ‘स्थानीय परिक्षण पुरा गरेपछि मात्रै काठमाडौंमा कार ल्याउने तयारी भइरहेको र अहिलेसम्मको परिषणलाई आधार मान्य हो भने दशैंपछि काठमाडौं ल्याउन सकिने छ’ कम्पनीले […]